DHAGEYSO Golaha amniga qaranka Soomaaliya oo ku dhawaaqay ciidamada u xil saaran sugaya amniga Muqdisho. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Golaha amniga qaranka Soomaaliya oo ku dhawaaqay ciidamada u xil saaran sugaya amniga Muqdisho.
Kulan looga hadlayay amniga gobolka Banaadir ayna goob joog ka ahaayeen taliyeyaasha ciidamada Booliska iyo asluubta Soomaaliya ayaa wuxuu maanta ka dhacay xarunta gaadiidka ciidamada Booliska Soomaaliyeed ee Degmada C/casiis.
Kulankaan ayaa lagu shaaciyaya amarka soo baxay gudiga amniga qaranka oo lagu go’aamiyay in ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo kali ah ay masuul ka yihiin sugida amniga magaalada Muqdish, sidoo kalena qaybaha kale ee ciidamada dowlada Soomaaliya aysan shaqo ku lahayn hadii aan loo yeerin waxaana arintaa warbahainta u sheegay taliyaha ciidamada Asluubta Soomaaliyeed GEN Bashiir Maxamed Jaamac Goobe.
taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeye Gaas Bashiir Cabdi Maxamed ayaa dhankiisa sheegay in laga bilaabo maant ciidamada booliska Soomaaliya laga doonayo inay ilaaliyana amaanka shacabkooda ayna ka hortagaan waxkasta oo xasiloonida wax u dhimaya.
Kulankaan amiga ku saabsan ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadaya ayadoo shalay dhowr ka mid ah isgoysyada magaalada Muqdisho la geeyay cutubyo ka tirsan ciidamada Booliska ee dowlada Soomaaliya kuwaasoo buuxinaya booskii ciidamadii xasilinta ee magaalada kal hore laga saaray
← WAR DEG DEG AH :Raisul wasaaraha Somalia oo shqa joojin kusameeyay mid ka mid ah wasiiradiisa.
DHAGEYSO Maxakamada ciidamada Qalabka side ee Soomaaliya oo xkun ku riday sadex nin. →